“Madaxweyne Muuse haduu sharciga jabiyo maamuuska ayaa laga xayuubinayaa” Murashax Madaxweyne Cirro | Hargeysa World~Herald
“Madaxweyne Muuse haduu sharciga jabiyo maamuuska ayaa laga xayuubinayaa” Murashax Madaxweyne Cirro
Wararka Caalamka"Madaxweyne Muuse haduu sharciga jabiyo maamuuska ayaa laga xayuubinayaa" Murashax Madaxweyne Cirro
(Isniin, 10-01-2022)-Guddoomiyaha iyo Musharrax madaxweyne ee Xisbiga Waddani ayaa kulan la qaatay dhallinyarada Gobolka Togdheer. Masuuliyiintan ayaa Maalmahan ba socdaal ku joogay gobolka togdheer. Masuuliyiintan uu hoggaaminaayo Musharrax Cirro ayaa kulamo kale duwan la qaatay odayaasha gobolka iyaga oo ka wada hadlay sidii Xisbiga Waddani loo taageeri lahaa cudud buuxdana loo siin lahaa kaodayaal ahaan.
maantana waxaa kulan la qaatay dhalinyarada si ay qayb uga noqdaan isbedelka wadanka ka socda ee lagu taageeraayo xisbiga, sidii uu noqon lahaa hormuudka doorashada madaxweynenimada ee soo fool leh sanadkan dhammaaadkiisa.
Musharrax Cirro, waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale, waxa uu ka hadlay Xeerka Furista Axsaabta Qaranka Xeer, oo muran badan dhaliyey.
Xafiiska Warqabadka ee Hargeysa Herald. Xarunta Guud: Magaalada Hargeysa.